COPAC: Inengi Labantu Selisiza Emihlanganweni YeOutreach KoBulawayo
Imihlangano le ayiphumelelanga ngoMvulo ngoba bekulomuntu oyedwa kuphela eKillarney Hall labayisikhombisa e Lockview Primary School.
WASHINGTON — Ikhomithi yedale lephalamende ebona ngokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha eye COPAC ithi abantu baze ngobunengi babo ngoLwesibili e Large City Hall le Barham Green koBulawayo emihlanganweni yeOutreach lapho abafundiswa ngokumunyethwe lugwalo olukhangelelwe ukuba yisisekelo sombuso esitsha olweDraft Constitution.
Uhlelo lolu aluphumelelanga ngoMvulo kuleli dolobho ngoba iCOPAC iveze ukuthi bekulomuntu oyedwa kuphela eKillarney Hall labayisikhombisa eLockview Primary School abeze kulimihlangano. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle kwezinye izigaba zelizwe.
UMnu. Believe Gaule, isiphathamandla seCOPAC utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ikhomithi yakhe iqhube umhlangano le hofisi kasibalukhulu ngolweSibili wokulolonga loluhlelo, njalo bakhangelele ukuthi imihlangano elandelayo iphumelele njengakwezinye izigaba zelizwe.